Aragti: The Jerusalem of Somalia "KISMAYO"
Gobolka Jubooyinka oo ka kooban Jubada Hoose, Jubada Dhexe, Bay & Gedo waxaa ku nool dad aad u faro badan oo kala duwan (hawie, Darod, Dir and Digil Midhif), waa dhul khayraad badan leh, webi & bad, deked & airport caalami. Nasiib wanaag 20kii sano danbe ka ognaa dagaalo sokeeye, baro kac, gaajo, colaad la abuuray, ugana danbeeyso kooxda Al Shabab ee ku xiran argagixisada caalimga.
Maanta waxaa la gaaray xiligii dadka degaanka ay aayahooda kaga wada tashaan laheeyeen, una heli lahaayen mamul mideysan oo la mideysan oo dheeli tiri kara qaabka Federal System'ka kaa oo mudo dheer hogaanka hayeen Puntland, Somaliland & kooxaha Muqdisho miro'na dhali waayey.
Kismayo is the Jerusalem of Somalia, colaad ka jirto Kismayo meelo badan ayey sameyn ku lahaan kartaa maanta.
Ujeeadada Kenya ee Kismayo maah Al Shabab uu qudha ee waa:
1. Cabsida Kenya ka qabto in Al Shabab u talaabsato gudaha Kenya.
2. Kenya oo hirgelinayso mashruuca shidaal badaha Somalia, Kismayo u fududeyn karto http://lesleyannewarner.wordpress.com/2012/07/21/east-africas-oilgas-rush-highlights-kenya-somalia-maritime-border-dispute/
3. Kenya oo dardar gelinayso mashruuc dhismaha $23 billion dekeda caalami ee Lamu, oo shidaalka South Sudan laga dhofiyo, Ethiopia isticmaali doonto, iyadoo Somalia lagala tashan mashruuc goboleedkani, oo dekeda Kismayo lagu xiri doono,
ganacsatada somalida ee Kenya control xoog loogu soo rogo doono.
Malez, Kibaki and South Sudan president inspect Lamu Port Plan
3. NFD ahaato buffer zone xeryaha qaxootiga ugu weyn dunida, dabcan Somali ugu badan ama ha ka yimada dhinaca Somalia ama dhinaca gobolada Ethiopia ee (kilika 5aad) Somalida degto.
Nasiib wanaag In Koox Nairobi ku shirtay qaab qabiil oo uu horkacayo Gandhi (Ogaden) & Wasirka Gashandhiga Kenya Mohamed Yusu Haji (Ogaden) Kismayo ma qabato, maxayse kaga duwna yihiin kuwii ka horeyey?
Waxaa talo ah in dib boorka looga jafo heshiskii 1995 ee Gen Mohamed Ibrahim Liiqliiqato kula galay qabaa'ilka wada dega Jubooyinka ee loo dhamaa, (Gaaljecel, Sheikhal, Harti, Marehan & Ogaden) nabada lagu baadi goobo.
Dowalda Mareykanka oo Kenya siinayso diyaaradaha loo yaqaan Daroon oo shacbi Somali lagu xasuuqi doono, qoraal ayaa loo gudbin doona in AMISOM lagu wareejiyo hubkaa.
Waxaan hubaa in Somali badan garwaaqsan doonto qorshe colaado abuuri karo ee Kismayo aan lo baahneen waqtigaan lagu jiro ee kwua wali aan fahmin ujeedada Kenya la baraarujiyo.
Ka aqriso halkan xasuuqa Kenya ku hayso Somalida http://www.hrw.org/reports/2012/05/04/criminal-reprisals
Waxaan soo jeedin in dowlada cusub ee inoo curan doonto Aug 2012 in arimaha Jubooyinka ka dhigtaa 1st priority:
1. In ciidamada Kenya hoos tagaan kana amar qaataan AMISOM, 2. Wasirka Gaadhndhiga ee Kenya oo Somali ah faraha kala baxo arimahan 2. In mamul ku salaysan degaanka laga hirgeliyo gobolka
3. In heshiskii 1995 ee Gen Liqliqato lagu wada dhaqmo
4. In dowlada magacowdo gudi la shaqeeyo Qaxootiga Somaliyeed ee Dhadhaab, dib loogu soo dejin dujuma & sablaale sidaana ururada caalmaiga ee taagara u hoos yimadaan dowalda Somalia (not Kenya).
4. In Gudi farsamo loo sameeyo baadi koobka Gobolka 5aad
Ila Tali Walaal iila.tali@gmail.com Naga soo wac halkan (Skype)